47 Nke a bụ okwu Jehova nke ruru Jeremaya onye amụma ntị banyere ndị Filistia+ tupu Fero emerie Geza.+ 2 Nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Lee! Mmiri si n’ebe ugwu+ sọrọ na-abịa,+ ọ ghọwo iyi tojubigara ókè. Ọ ga-erikpukwa ala a na ihe niile dị n’ime ya, rikpuokwa obodo ya na ndị bi n’ime ya.+ Ndị ikom ga-akwa ákwá, ndị niile bi n’ala a ga-etikwa mkpu ákwá.+ 3 Mgbe ha ga-anụ ụda ụkwụ oké ịnyịnya ya,+ nụkwa mkpọtụ ụgbọ ịnyịnya agha ya,+ bụ́ oké ụzụ nke ụkwụ ụgbọ ịnyịnya ya na-eme,+ ndị nna agaghị ele anya n’azụ ịkpọrọ ụmụ ha, n’ihi na aka ha akụdawo, 4 n’ihi ụbọchị nke na-abịa bụ́ nke a ga-ebibi ndị Filistia niile,+ bụ́ ụbọchị a ga-ebipụ onye ọ bụla fọdụrụ nke na-enyere Taya+ na Saịdọn+ aka.+ N’ihi na Jehova ga-ebibi ndị Filistia,+ bụ́ ndị fọdụrụ n’ime ndị si n’agwaetiti Kaftọ.+ 5 Isi ga-akwọcha+ Geza.+ E bibiwo Ashkelọn.+ Unu ndị fọdụrụ na ndagwurugwu ha, ruo ole mgbe ka unu ga na-ebekasị onwe unu ahụ́?+ 6 Ehee, mma agha Jehova,+ ruo ole mgbe ka ị na-agaghị anọ jụụ? Banye n’ọbọ gị.+ Zuru ike, nọrọ jụụ. 7 “Olee otú ọ ga-esi nọrọ jụụ, ebe ọ bụ na Jehova enyewo ya iwu? Ọ bụ maka Ashkelọn nakwa ụsọ oké osimiri.+ Ọ bụ n’ebe ahụ ka ọ gwara ya gaa.”